अरुणभ्याली हाइड्रोपावरले सोमवारदेखि ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री गर्दै - Sankalpa Khabar
अरुणभ्याली हाइड्रोपावरले सोमवारदेखि ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री गर्दै
५ बैशाख १५:२३
काठमाडौं । अरुणभ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडले सोमवारदेखि ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री खुला गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले प्रतिशेयर रू. १०० अंकित दरको ५२ लाख ४१ हजार १९७ कित्ता हकप्रद शेयर विक्री खुला गर्न लागेको हो । हाल कायम चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ४ करोड ८२ लाख ३९ हजार ४०० को आधारमा कम्पनीले १ बराबर शून्य दशमलव ५ को अनुपातमा हकप्रद शेयर विक्री गर्न लागेको हो ।